भा’इटी’काको च’लन आ’उनु भ’न्दा पहिले दा’जुब’हिनी दि’दीभा’ईबी’च यौ न स’म्ब’न्ध हु’न्थ्यो’- संस्कृतिविद् डा.जगमान – AB Sansar
November 15, 2020 November 15, 2020 adminLeaveaComment on भा’इटी’काको च’लन आ’उनु भ’न्दा पहिले दा’जुब’हिनी दि’दीभा’ईबी’च यौ न स’म्ब’न्ध हु’न्थ्यो’- संस्कृतिविद् डा.जगमान
काठमाडौं । वरिष्ठ संस्कृतिविद् तथा इतिहासकार डा. जगमान गुरुङ संस्कृत भाषामा गहिरो द’ख्खल राख्ने ब्य’क्तित्व हुनुहुन्छ । नेपाली समाजका चालचलन बारे गहिरो अध्ययन गर्नुभएका गुरुङको मत अरुभन्दा फरक छ । उनी तिहार संस्कृति बारे यस्तो बताउनु हुन्छ । तिहार हाम्रो एउटा चाड हो । हिन्दीमा तेउहार भनिन्छ । तेउहारले तिहार होइन सिंगै चाडपर्ब भन्ने जनाउँछ उनीहरुकोमा । उनीहरु तिहारमा दीपावलीसम्म मनाउँछन् । ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, *****
त्यसैले उनीहरुको र हाम्रो तिहार मिल्दैन । हामी यमपञ्चकको पाँच दिनलाई तिहार भन्छौं । अब बुझ्नु पर्ने कुरा छ, यमपञ्चक केलाई भनिन्छ भनेर । यम भनेको धर्म । धर्म भनेको नीति नियम हो । पञ्चक भनेको पाँच दिन । पाँच दिन मनाइने पाँच तिहारमा काग, कुकुर, गोरु, गाई र मान्छे छुट्टा छुट्टै पुजिन्छ । यसले त्यो बेला देखिको समाज र संस्कृतिलाई जनाउँछ । त्यसबेला के कुरा केन्द्रमा थियो समाजले त्यहि चिजलाई पूजा गर्दै आएको छ ।
पहिलेको घुमन्ते, शिकारी, पशुपालन, कृषि, हुँदै अहिले मान्छे आधुनिक युगमा आइपुग्यो । घुमन्ते युगमा सूचनाका केही साधन थिएनन् । त्यसबेला सूचनाको मुख्य सहयोगी कागलाई बनाइथ्यो । काग बोटमा बसेर करायो भने समाचार ल्याएको भन्ने मानिन्थ्यो । काग काराएपछि मान्छेहरु ‘सुवोल सुवोल, ठाँउ सरी बस, शुभ समाचार ले’ भन्थे ।
आफ्नो जीवनमा सूचना ल्याउने सहयोगी भनेर कागलाई पूजा गर्न थालियो । त्यसपछि मान्छे शिकारी युगमा आयो । त्यो बेला शि’कार खेल्नका लागि कु’कुरको प्रयोग ग’रिन्थ्यो । कुकुरको सुंघ्ने श’क्ति तेज हुन्छ । उसले के हुँदैछ भनि अगाडि नै जानकारी दिने र अन्य जनावारको आ’क्रमणबाट ब’चाउने गथ्र्याे । कु’कुरलाई आ’ज्ञाका’री जनावारको रुपमा मानिन्छ । त्यसैले कु’कुर मा’निसको शि’कारी जी’वनको सहयोगी हो । *सुदुर समाज **** **थप भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ ****,
शि’कार खेलेर मासुले पालिदै गरेका मान्छेहरु पशुपालन गरेर बस्नथाले । दूध, दहि, घिउ, उत्पादन गर्ने र अन्य ठाँउका मान्छेसँग तिनै सामान साटेर खानथाले । वस्तु विनिमयको युग त्यसरी सुरु भयो । खाद्य वस्तु र अन्य साधनलाई सम्पत्ती मान्ने बेला थियो त्यो । त्यसबेला गाईंलाई पुज्न थालियो । पछि मुद्राको अविष्कार भएपछि बेचबिखन हुन थाल्यो ।
भ’विश्यका लागि वस्तु भन्दा पनि मान्छे पैसा कमाउन थाले । त्यसैले उनीहरुले गाईलाई ल’क्ष्मीको रुपमा पुज्नथाले भने मुद्रा र रुपैयाँ पैसाको पूजा गर्ने चलन पनि त्यसै बेला’देखि भयो । पशुपा’लन युग’सँगै खे’तीको यु’ग सुरु भएको पा’इन्छ । त्यसपछि मा’छेहरु कर्सन क’र्ममा लागे । कर्सन भन्या कृषिकर्म ।
कृषिको लागि गो’रु प्र’योग हु’न्थ्यो । कृषिको मुख्य सहयोगी गो’रुलाई उ’नीहरु देव’तासरी मा’नेर पू’जा गर्नथाले । गोरु मा’न्छेको कृषि जीव’नको द्योतक हो । त्यसपछि आयो भा’इटीका । तिहार भनेको चा’हिँ सु–सभ्य, सु–संस्कृत मानव जीवनको द्यो’तक हो । त्यसबे’ला आफ्नै परि’वारका स’दस्यबी’च यौ;न स;म्बन्धको च;लन थियो ।
त्यस्तो चलन रो;क्दै दा;जुभाई र दि;दीबहिनीबी;च यौ;न स;म्ब;न्ध हु;नुहुँ;दैन भन्ने च;लन आ;यो । एकले अ;र्कोलाई पू;जा गर्ने स;म्बन्धको रुप;मा या भ;नौं सु;संस्कृत र स;भ्य स;माज निर्माण गर्न यसको वि;कास भएको दे;खिन्छ । का;र्तिक शु;क्ल द्वि;तीयाको दिन यमराज आफ्नो ब;हिनी यमु;नाको घरमा गएर टी;का लागाएको पौरा;णिक क;;;था छ । तर यसको वैदिक कथा अर्कै छ ।
ऋग्वेदको ‘यमयमी शुद्ध’ भन्ने कथामा छ यो कुरा । यम र यमी भन्ने जुम्ल्या;हा दा;जुब;हिनी थिए । एक दिन ब’हिनी यमीले दाइ यमसँग बै’वाहिक जीवनमा बा’धिन प्र’स्ताव गर्छिन् । यौ ‘न स म्बन्धमा जाने प्र स्तावले उ विच लित हुन्छ । यमले बहि नीलाई ए उटै आ माबाट एकै सम यमा ज न्मेकाले हा मीबीच त्य स्तो स म्बन्ध हुँ दैन भनेर स म्झाउँछ ।****भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ ****,*
मान्छेको धर्म भनेकै नैतिकतामा छ । पछि यहि कुरा ऋग्वेदले यमुना र यमराजको कथामा परिणत गर्यो । बेद भनेको समाजका चालचलनलाई लिपिवद्ध गरेको कुरा हो । त्यसबेला समाजमा हुने यौ’न जी’वनलाई सु–ब्यव’स्थित गर्दै आ’जको यो सभ्य समाज नि’र्माण भएको छ । यस्तो चा’ड अन्य कुनै मुलुकमा छैन ।
नेपालकै उत्तरी भेगमा पाँच प’त्नी बि’वाह गर्ने चलन अ’झै यदा’कदा छ । त्यस्तै गुरुङ र तामाङमा पनि कुटुम्बेली चल्छ । मगरमा पनि यो चलन थियो । तर अहिले पाल्पा, स्याङजा, तनहुँका मगरहरुले मामाकी छोरी विवाह गर्ने फुपूकी छोरी नगर्ने भन्ने चलन ल्याएका छन् । ठकुरीमा पनि यस्तै च’लन छ ।
वि.सं. १९९४-१९९५ सालमा रंगनाथ पौडेल प्रधानमन्त्री हुँदा पश्चिम सतथौलाका जै’सी बा’हुनहरुलाई एउटा रु’क्का पठाएर तिमीहरुले भाञ्जी बिवाह नगर्नु भनेका छन् । रु’क्का भनेको अर्डर पेपर हो । मनुस्मृतिमा लेखिएको छ– ‘दक्षिणे मा’तुली क’म्पा, उत्तरे माषेमक्षण ।’ यो भनेको भारत तिरका बाहुनले मामाका छोरी बिहे गर्छन् र उत्तरकाले मा’सु खा’न्छन् । मतलव ती दुबै न’राम्रा हुन् भनिएको छ । मुस’लमानले आ’फ्नै दा’इभा’ईका छोरी वि’वाह गर्छन् ।
को’ख र यो’नी मा’त्र बा’र्ने चल’न ति’नीहरुको छ । यम र य’मीको कथा’बाट चा’हिँ आ’र्यहरु प’रिष्कृत हुँ’दै भाइ ति’हारका रुपमा स’भ्य संस्कृति अघि ब’ढाएको देखिन्छ । त्यसैले तिहार नै’तिकताको ध’रोहर हो । य’सले नी’ति नि’यम कायम गरा’यो । स’माजलाई सभ्य र सु’संस्कृत ब’नायो । त्यसैले स’भ्य जी’वन, सु’संस्कृत र आ’र्दश जी’वन जी’उने शन्देश यम द्विती’याले दि’एको छ । चक्रपथ डट कमको सहयोगमा’